सडक पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउन मन्त्री नेम्वाङको निर्देशन «
सडक पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउन मन्त्री नेम्वाङको निर्देशन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्बाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्रभन्दा पनि समग्रमा सिंगो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, “कुनकुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ सिंगो मास्टर प्लान त चाहियो होला नि मुलुकको । एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन । त्यो पनि सुरु गर्नुभएको छ गर्नुहोस् तर सिंगो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो नी । यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् ।” यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादका कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्बाङले बताए । आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने उनले बताए । उनले भने, “कार्यदल बनाएर हुन्छ कि जे बनाएर हुन्छ आदिउदी हामीलाई समस्या परेको भनेको यो मुआब्जा भने पनि, हर्जना, क्षतिपूर्ति जहाँ ढिलाइ जे भने पनि हामीलाई समस्या पार्ने भनेको राइट अफ वे को कुरा हो । यसलाई एउटा राइट अफ वे कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल बनाऔं न मैले त पहिलेदेखि भनेको हो ।”
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिस्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको उनले बताए । अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । त्यसैले आयोजना पिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए । उनले केही सानातिना पुल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने बताए । त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृत गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिँदा काम अगाडि बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान भएर जाने पनि बताए ।
मन्त्री नेम्बाङले संसदीय समितिहरूका कारण पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए । एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताए । उनले भने, “जानकारी नभएको हो कि के हो यो चाहिं मैले अलि गम्भिरतापूर्वक नै उठाएँ । मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन कत्तिको हुन्छ ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन ? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन ?”
मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने उनले बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयस्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशिल बनाउन उनले आग्रह गरे ।
मकवानपुरका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण सुरु
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण केन्द्रको कार्यालय हेटौंडाद्वारा सुरु गरिएको विद्युतीकरण कार्यका लागि चालु आर्थिक